विकिपीडिया यसका पाठकहरु द्वारा मिलीजुली लेखिएको एक विश्वकोष हो। यो साइट एक विकि हो, अर्थात जो कसैले पनि, तपाँईले समेत, यसका लगभग कुनैपनि लेख, अहिलेनै, सम्पादन गर्न सक्दछ। कुनैपनि लेखको माथि रहेको परिवर्तन् लिंकमा क्लिक गरेर सम्पादन गर्न सकिन्छ। तर, त्यसो गर्नुभन्दा पहिले, तपाँई यो लेख पढ्न चाहनु हुन्छ की ?
१ विकिपीडिया अन्वेषण
४ हतोत्साही नहुनुहोस्
५ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ कि?
६ यहाँ पनि हेर्नुहोस्
६.१ सामान्य जानकारी, निर्देशन र सहायता
६.२.१ सहयोगी पाटो
६.२.२ गहन विश्लेशष विभाग
६.३ विकिपीडिया समुदाय
विकिपीडिया अन्वेषण[सम्पादन गर्ने]
अङ्ग्रेजी विकिपीडिया भित्र हरेक प्रकारका राजनीति, विज्ञान, इतिहास, संगीत, धर्म, पप संस्कृति, र खेलकुद देखि त्यसबिचका सबै विषयहरु सम्बन्धित ठुलो मात्रामा जानकारीहरू रहेको छ। नेपाली भाषामा भने त्यसको विकास सुरुवात चरणमा छ। विभिन्न बर्ग भित्र ब्राउज गर्नुहोस्।
इतिहास · गणित · जीवनी · प्रविधि · भूगोल · विज्ञान · समाज · संस्कृति
अ-ज्ञ इन्डेक्स · Browse articles · Browse categories · Browse portals · Other indexes
तपाईँ लेखभित्रको अक्षर खोजि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देब्रेपट्टि रहेको, खोजी बट्टा मा गएर आफूले खोज्न चाहेको कुनै पनि बिषय सँग सम्बन्धित शब्द टाईप गरेर "खोज" बटन क्लिक गर्नुहोस् । याद गर्नुहोला, विकिपीडियाको आफ्नै खोज सेवाले सर्भरमा ज्यादा भारी पर्न जाँदा कहिलेकाहिं काम नगर्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई गूगल-आधारित विकिपेडिया डेटावेस खोजीमा पठाईने छ । याद राख्नुहोस् विकिपीडियालाई खोज्ने अरू पनि धेरै उपायहरू छन्।
यदि तपाईंले कुनै साँच्चिकै गतिलो कुरो भेट्नुभयो भने वार्तालापमा आफ्नो बिचार किन नछोड्ने? त्यसो गर्नको लागि तपाईंले वार्तालाप लिंक (यो पृष्ठको माथिल्लो भागमा रहेका ट्याबहरू हेर्नुहोस्), मा क्लिक गरेर छलफल पृष्ठमा जान सक्नुहुन्छ। त्यस पछि छलफल पृष्ठमा रहेको परिवर्तन क्लिक गर्नुहोस्, अथवा परिवर्तन को दायाँ रहेको + मा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो बिचार थप्नुहोस् । हामीहरूले सधैं तपाईंका उपयोगी सुझावहरूको प्रशंसा गर्ने छौं ।
यदि तपाँईलाई लाग्छ